Est 13:1 Asoerosa mpanjaka lehibe, amin' ny solom-panjaka sy ny governoran' ny faritany fito amby roapolo amby zato, hatrany India ka hatrany Etiopia, eo ambany fahefany, mandefa izao manaraka izao:
Est 13:2 Na dia manapaka firenena maro indrindra aza aho, sy efa nampanaiky an' izao tontolo izao, tsy manampatra ny fahefako mba hirehareha amin' izany no tiako, fa ny mampahazo fandriam-pahalemana ny vahoakako, mandritra ny andro iainany, amin' ny fanapahana malefaka sy mora, mampandry fahizay ny fanjakako sy manao tsara toky azy hatrany amin' izay fara sisiny indrindra, ary mampirobona ny fiadanana mamin' ny olombelona rehetra.
Est 13:3 Ka dia nanontaniako tamin' ireo mpanolo-tsaina ahy, izay azo atao hahatanteraka izany zava-kendreko izany; ary ny iray tamin' izy ireo atao hoe Amanà, izay be fahendrena indrindra eto aminay, sady efa malaza noho ny fahafoizan-tenany tsy mety miova sy ny firaiketam-pony aminay tsy mahay mivadika, ary mahazo ny laharana faharoa amin' ny fanjakana.
Est 13:4 dia nampahalala ahy fa misy vahoaka izay ratsy hevitra, tafaharo amin' ny foko rehetra eto ambonin' ny tany, mifanohitra amin' ny vahoaka rehetra noho ny lalàny maniratsira lalandava ny didin' ny mpanjaka, any ka misakana ny hisian' ny fifanarahana lavorary eto amin' ny fanjakana entiko.
Est 13:5 Nony hitako fa io vahoaka iray monja io, izay mifanohitra lalandava amin' izay mety ho olombelona, sy misaraka amin' izy ireo, noho ny lalàny hafahafa, ary tsy tia akory izay mahasoa ahy sy manao izay faran' izay ratsy indrindra ka misakana ny fandrosoan' ny fanjakana,
Est 13:6 dia nandidy aho, fa izy ireo, izay voatondro ao amin' ny taratasin' i Amàna, ilay lohan' ny raharaha sy hajaina hoatra ny faharoan-draiko, dia haringan' ny sabatry ny fahavalony avokoa mbamin' ny vadiny aman-janany, tsy hasiana miangana, tsy hananana antra na indrafo, amin' ny fahefatra ambin' ny folon' ny volana faharoa ambin' ny folo, izay volana Adara, amin' ity taona ity;
Est 13:7 mba ho indray midina any ambanin' ny tany, amin' ny famonoana azy ho faty amin' ny andro iray ihany, ireo olona mpanohitra hatry ny fahataloha ka mandrak' ankehitriny ireo, ka ny raharahantsika amin' ny andro manaraka dia hody amin' ny fandrosoana sy amin' ny fiadanana lavorary. (Vakiana manarakaraka ny toko IV, 17)
Est 13:8 Ary Mardokea nivavaka tamin' ny Tompo, tamim-pahatsiarovana ny asa rehetra nataony,
Est 13:9 ka nanao hoe: Tompo o, Tompo o, Mpanjaka mahefa ny zavatra rehetra hianao, fa eo ambany fahefanao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy misy olona mahasakana anao, raha nikasa ny hamonjy an' Israely hianao.
Est 13:10 Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany, mbamin' ny zava-mahagaga rehetra eo ambanin' ny lanitra.
Est 13:11 Hianao no Tompon' ny zavatra rehetra ary tsy misy mahatohitra anao, hianao Tompo.
Est 13:12 Mahalala ny zavatra rehetra hianao; ka fantatrao fa tsy mba nentin-drehareha na avonavona, na fitsiriritam-boninahitra kely akory, no tsy mba niankohofako teo anatrehan' i Amanà, mpiavonavona;
Est 13:13 satria vonon-kanoroka ny dian-tongony aza aho, ho famonjena an' Israely.
Est 13:14 Fa ny nanaovako izany, dia ny mba tsy hanaovako ny voninahitr' olombelona ho ambony noho ny voninahitra tsy maintsy omena ny Andriamanitro, ka dia tsy hiankohoka eo anatrehan' ny hafa aho, afa-tsy hianao, Tompo, ary tsy mba fiavonavonana no hanaovako izany.
Est 13:15 Koa ankehitriny, ry Tompo Andriamanitro sy Mpanjakako, Andriamanitr' i Abrahama, mamindrà fo amin' ny vahoakanao, fa manopy maso anay ny fahavalonay hamono anay, sy handringana ny lovanao faharazana.
Est 13:16 Aza atao tsinontsinona ny anjaranao, navotanao avy any amin' ny tany Ejipta.
Est 13:17 Henoy ny fivavahako! Hasoavy ny zara lovanao, ovay ho fifaliana ny fisaonanay, mba ho velon' aina, ka hankalaza ny anaranao izahay, ry Tompo; ary aza manakombona ny vavan' ireo midera anao.
Est 13:18 Israely rehetra koa, samy nitaraina tamin' ny Tompo araka izay tratry ny heriny avokoa, fa efa mananontanona eo imasony ny fahafatesana.